10 Xiddig Oo Caan Ahaa Oo Xabsiga La Dhigay - Kuwii Garoomada Ku Jiray Iyo Kuwii Hawlgabka Ahaa Xilliga La Xidhay - Laacib
HomeWararka Champions League10 Xiddig Oo Caan Ahaa Oo Xabsiga La Dhigay – Kuwii Garoomada Ku Jiray Iyo Kuwii Hawlgabka Ahaa Xilliga La Xidhay
10 Xiddig Oo Caan Ahaa Oo Xabsiga La Dhigay – Kuwii Garoomada Ku Jiray Iyo Kuwii Hawlgabka Ahaa Xilliga La Xidhay
December 25, 2021 Abdiwahab Ahmed
Cilmi-baadhis la sameeyey sannadkii 2020 ayaa lagu ogaaday in 100,000 kasta ee UK ku nool, in 167 ka mid ah xabsiga loo taxaabay waqti ka mid ah noloshooda amaba ay hadda xidhan yihiin, kuwaas oo ay ku jiraan ciyaartooyo kubadda cagta ah iyo kuwo tartamada kale ka ciyaara.
Sida dadka kale ee caadiga ah ayay ciyaartoydu dembiyo samayn karaan, sharciguna waxa uu ula siman yahay dadka kale ee caadiga ah, haddii si kale loosii eegana iyaga ayaaba ka ciqaab xun maadaama ay yihiin shaqsiyaad caan ah oo ay da’yarku ku dayanayso.
Arrinta raadkeedu qoyan yahay ee hadda taagan ayaa ah, dacwadda ku socotay Benjamin Mendy oo tan iyo bishii August ku xidhnaa UK kaddib markii lagu eedeeyey inuu kufsi kula kacay illaa shan dumar ah oo ay qaarkood ka yaraayeen da’da 16 jirka, waxaana uu jeelka kusii jiri doonaa illaa bisha June oo xukunkiisa kama dambaysta ahi soo bixi doono.
Benjamin Mendy oo kali ahi ma gelin xabsi ay u raacday fadeexad, waxaana jiray ciyaartooyo kale oo kiiskiisa oo kale lagu oogay, kuwaas oo ay xataa ku jiraan kuwo lagu eedeeyey inay carruur faro-xumeeyeen.
Halkan waxa aanu dib ugu milicsan doonaa 10 ciyaartoy oo caan ahaa oo xabsiga la dhigay xilliyo ka mid ahaa noloshooda, kuwaas oo qaarkood ay ciyaaraha ka fadhiisteen intii ay jeelka ku jireen.
Halyeyga reer Brazil oo lagu tilmaamo inuu ka mid ahaa ciyaartoydii ugu xirfadda badnaa ee soo maray dunida ayaa sannadkii 2020 xabsiga la dhigay kaddib markii uu Paraguay ku tegay baasaboor been abuur ah.
Muddo shan bilood ah ayay isaga iyo walaalkii Roberto de Assis ku xidhnaayeen jeelka, waxaana lagu xukumay shan bilood oo xadhig ah iyo lacag ganaax ah oo gaadhaysa $200,000 dollar.
Maxkamadda ayaa saayiraad badan u samaysay maadaama dembigoodu uu u qalmayay in lagu rido shan sannadood oo xadhig ah, waxaase loogu beddelay ganaax lacageed iyo shan bilood. Xafladdiisii dhalashada ee 40 jirka, waxa uu Ronaldinho ugu dabbaal-degay gudaha xabsiga.
Laacibkii hore ee Manchester City iyo Sunderland waxa la xidhay sannadkii 2016kii, kaddib markii lagu eedeeyey inuu kufsaday ilmo-yar, waxaana laga caydhiyey kooxdiisii Sunderland ee uu waqtigaas u ciyaarayay.
Adam Johnson ma samaynin kufsi, hase yeeshee waxa uu xidhiidh la sameeyey gabadh ay da’deedu ahayd 15 jir oo uu xidhiidh galmo dhex-maray, taas oo uu sharcigu ka xaaraan-timaynayo.
34 jirkan ayaa laga sii daayey xabsiga sannadkii 2019kii kaddib markii uu xabsiyada HM Prison Leeds iyo HM Prison Moorland ku qaatay kala-badh intii lagu xukumay.
Halyeygii difaaca Arsenal ayaa xabsiga la dhigay sannadkii 1990kii, waliba ma ahayn mar kaliya ee dhawr jeer ayaa la xidhay. Intii uu xabsiyada ku noqnoqonayay, waxa shaki la geliyey xirfaddiisa kubadda cagta oo mar la sheegay inuu xataa ka fadhiisan doono.
Aadams oo muddo dheer kabtan u ahaa Arsenal waxa afar jeer loo xidhay inuu baabuur kexeeyey isaga oo khamri cabsan, waxaana jirtay xilli uu shil baabuur ku galay Rayleigh, Essex.
57 maalmood ayuu ku xidhnaa xabsiga Chelmsford, waxaana waqtigaas uu qirtay in aanu waxba ka baranin qaladaadkii hore ee uu sameeyey.
“Aniga xabsiga waxba kama aanan soo baran. Ma jirin waxbarasho ku saabsan sababta aan halkaas u galay amaba xanuunkayga.” Ayuu yidhi.
Inta uu garoomada ku jiro waxa uu ahaa ciyaartoy dhib badan oo aan xakamayn karayn cadhadiisa, waxaana la xasuustaa inuu dhawr jeer ku kacay falal taageereyaasha argagax geliyey isaga oo lugaha jaray ciyaartooyo kasoo horjeeday, kuwo kalena garoonka dhexdiisa kula dagaallamay.
Barton laba jeer ayaa xabsiga loo taxaabay isaga oo socda gudaha magaalada Liverpool City Center, waxaana uu xabsiga ku jiray 77 maalmood.
Sannadkii 2008 ayaa afar bilood oo xadhig ah lagu xukumay markii uu gacanta ula tegay ciyaartoy ay hore ugu wada ciyaareen Manchester City oo la odhan jiray Ousmane Dabo.
Hadda waa tababaraha kooxda Briston Rovers, waxaanay sannadkii 2019kii gacan isku qaadeen tababarihii hore ee Barnsley ee Daniel Stendel, wax xukun ahna kuma dhicin markan.
Halyeyga hore ee Arsenal iyo xulka qaranka England oo Gunners u dhaliyey 185 gool, waxa uu ahaa shamac ka baxayay garoonkii hore ee Arsenal ee Hughbury. Laakiin noloshiisa kama madhnayn rabshad iyo dhibaato. Markii ay da’diisu noqotay 19 jir ayaa ganaaxii ugu horreeyey lagu riday isaga oo si xun u kexeeyey baabuur, waxaana la dhigay xabsiga Chelmsford muddo laba toddobaad ah. Waana isla jeelkii uu ku xidhnaa Admas.
Xiddigaha kale ee la xidhay waxa ka mid ahaa Duncan Ferguson oo Everton u ciyaari jiray, kaas oo markiisii ugu horreysay jeelka loo taxaabay isaga oo iskuulka dhigta. Rene Higuita, Jan Molby, Marlon King iyo Lee Hughes ayaa dhamaantood xabsiyada ku qaatay qayb ka mid ah noloshooda.